उम्मेद्वार - प्रदिप गिरी
प्रदिप गिरी नेपाली कांग्रेस सिराहा १
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदिप गिरी सिरहाको लहान –१४ बस्तिपुरमा २००६ सालमा जन्मिनु भएको हो । गाउँकै बस्तिपुर माविमा १३ वर्षको उमेरमा एसएलसी पास गर्नु भएको थियो । भारतको वनारसस्थित काशी विश्वविद्यालयमा पढ्न जाँदा प्रजातान्त्रिक युवा दलमा प्रवेश गरेर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका गिरी २०२४ सालमा उपाध्यक्षसमेत बन्नुभएको थियो । त्यही वर्ष नेपाल आएका बेला उहाँ पक्राउ पर्नुभयो र २ वर्ष जेलमा बिताउनु भएको थियो । २०२६ सालमा जेलबाट छुटेपछि गरि पुनः वनारस पुगेर वि.पी. कोइरालाको सशस्त्र आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको थियो । २०३६ सालमा भएको निर्दल र बहुदलको चुनावमा सिरहामा बहुदलको प्रचारमा लागेको बेला उहाँ पुनः पक्राउ पर्नु भएको थियो । त्यसबेला सिरहामा देशकै सबैभन्दा बढी बहुदलको पक्षमा मत खसेको थियो । बहुदलको पक्षमा मत मागेको भन्दै उहाँ फेरि पक्राउ पर्नुभएको थियो । त्यसपछि पनि २०४२ को सालको सत्याग्रह र ०४५ मा जेल पर्नु भएका गिरी निरन्तर नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय हुनुहुन्छ । बहुदल पुनःस्थापनापछि २०५१ सालमा सिरहाको क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित हुनु भएको थियो । त्यसपछि ०५६ सालको चुनावमा भने नेकपा एमालेका धर्मनाथ साहसँग पराजय हुनुभएको थियो । लोकतन्त्र स्थापनापछि २०६४ र २०७० सालको चुनावमा भने उहाँ समानुपातिक तर्फबाट सभासद् हुनुभएको थियो ।